Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Chili » Misokatra indray i Shily ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny feno
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Chili • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Hesorina ny quarantine ho an'ireo mpandeha iraisampirenena vita vaksiny tanteraka raha ratsy ny valin'ny fitsapana PCR natao azy ireo rehefa tonga tany Chili izy ireo.
Ny fidirana ao Shily dia azo avy amin'ny seranam-piaramanidina telo an'ny Iquique, Antofagasta, ary Arturo Merino Benítez.
Alohan'ny hidirany ao amin'ny firenena dia tokony hamafisina ireo vaksinim-pandraisana noraisin'ny governemanta iray mba hahafahan'ny pasipaoro mivezivezy mivoaka avy any Chile.
Ny olona tsy vita vaksiny (ary noho izany tsy afaka mangataka passé mobility) dia mbola tsy mahazo miditra ao amin'ny firenena.
Nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Chili fa manomboka amin'ny 1 Novambra 2021, dia hongotana ny quarantine ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena vita vaksiny tanteraka raha vita ny valin'ny fitsapana PCR azy ireo rehefa tonga izy ireo. Shily dia ratsy.
Tokony hatao vaksiny feno ny mpandeha ary ny vaksiny dia tsy maintsy ekena any Chili.
Ireto manaraka ireto dia takiana amin'ny fampahalalana ofisialy:
Miditra amin'ny Shily dia afaka amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina telo an'ny Iquique, Antofagasta, ary Arturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Alohan'ny hidirany amin'ny firenena dia tokony hamafisina ny vaksinin'ny governemanta iray mba hahafahan'ny pasipaoro mivezivezy (pase de Movilidad) mivoaka avy amin'ny Shily. Ny fangatahana fankatoavana vaksin dia misy amin'ny Internet.
Fenoy ny takelaka elektronika "Affidavit of the Traveller" hatramin'ny 48 ora alohan'ny hidiranao, izay tokony hanomezanao ny mombamomba anao, ny fahasalamanao ary ny tantaranao. Ity takelaka ity dia hanisy kaody QR ho fitaovana fanamarinana. Afaka vita amin'ny Internet (misy ny kinova anglisy).
Ireo mpizahatany miditra ao Shily dia tsy maintsy manana fiantohana ara-pahasalamana mitentina 30,000 XNUMX $.
Porofon'ny fitsapana PCR ratsy natao 72 ora alohan'ny hidiranao mbola ilaina. Ny fitsapana PCR dia tanterahina indray ao amin'ny seranam-piara-manidina any Chile.
Ny fitsapana PCR dia tanterahina ao amin'ny seranam-piara-manidina any Chile. Ny olona miditra ao amin'ny firenena dia tsy maintsy mandeha amin'ny fitaterana manokana ary mivantana any amin'ny toeram-ponenana voatondro manomboka amin'ny fotoana nidirana ary miandry eo ny valin'ny fitsapana PCR (maharitra 24 ora). Raha ratsy ny fitsapana dia tsy mihatra ny quarantine 5 andro.